Ukulifaka kufana nebhonasi | News24
Ukulifaka kufana nebhonasi
Cape Town - Uyolihamba uze uliqede izwe, ayikho into ethobisa umuntu njengocansi.
Angikhathali noma kungathiwa indoda inolaka olungakanani, kuba khona oyedwa wesifazane ekwaziwayo ukuthi uma esethintwe wuye, kuyashintsha ukwenza kwehle nolaka.
Nabesifazane nabo noma kungathiwa umuntu akangeneki uyaziwa, kuba khona ugalakajana omaziyo ukuthi uthanjiswa kuphi. Kuyona yonke imigilingwane ehlobene nocansi, sengithole ukuthi ukhiye ekuyiwona wona, ukuwotawotana.
Ukulifaka phakathi yinto yokugcina nesingayibiza ngebhonasi.
Ngike ngadlana indlebe nabathile ukuzama ukuthola izindawo ekumele zingashiywa ngaphandle uma kuwotwawotwanwa.
Intamo: Kungamane kungaphinde kungenelwanwe uma engangiqabuza emqaleni nasezindlebeni bese ehamba engasacobhozanga (Ukucobhoza yisona sigaba sokugcina, IBHONASI), kusho umngani.
USis'Omdala uthi: Ukuqatshuzwa emqaleni kumnandi ngoba ningaqala noma nikuliphi igumbi noma kungaba yisekhishini, nijahane nigijimisana ngolimu indlu yonke nigcine niwangene wonke amakamero.
Usakhona entanyeni, kuba nalo moyana ofudumele kamnandi owuzwisa isithandwa sakho ngesikhathi uqhubeka usiqabula usiphefumulela eduze.
Izindlebe: Uma udlulela ezindlebeni usamgijima ngolimi, ithi uziqabula sakuzikhotha uzimunca kule ndawo engena amacici, uphinde unyenyezele isithandwa sakho amazwi amnandi.
Isisu: Ngezansana kwezimbambo, kwamancane, ayikho indawo emnandi njengokudlaliswa lapho!!! Ngisho kungathiwa awuzazi izithakazelo, uma ubanjwa kwamancane udlaliswa ngolimi sengathi umuntu uyakuqopha, ungagcina uzifundile umthakazele umkhumbuze okhokho bakhe.
Noma ngabe usebenzisa ulimi noma isandla, ngiqinisekisekile kune mizwa enamandla eyafihlwa ezinhlangothini, kuvuka indumiso nomenziwa angakholwa ukuthi kunobumnandi obuvalelwe emzimbeni wakhe uqobo, kuphela nje kumele kube khona ozofika azozamazamisa ichibi kuqubuke uju.
Ungalokothi uyikhohlwe le ndawo uma nidlalisana nesithandwa sakho.
Izandla: Izandla uqobo lwazo (hands). Ingaphandle nengaphakathi lezandla linemizwa ekuthambisa igijimise igazi umzimba wonke. Uma unobuchule bokuqabuza izandla, uzovumelana nami ukuthi "umenziwa " umqeda amandla avumele intando yakho.
Kumnandi ukwazi umzimba wesithandwa sakho ngaphambili nangemuva. Akumele kube nendawo emzimbeni wothandiweyo wakho, ekukhulunywa ukuthi akaze uyithinte uzame ukuthola ukuthi iqukethe buphi ubumnandi.
Ngithi kini, ningajahi ukulifaka, lokho akube okokugcina. Ubumnandi bonke bulele ekutheni uyihamba kanjani indlela eya eKhenana, uma uhluleke lapho, kungenzeka izwe loju nezinyosi ugcine ngokulikhomba ngezandla.
Asixhumane ekhasini le Facebook Sis'Omdala noma ku-zanelewakwamtshali@gmail.com
39% - 2006 votes
12% - 619 votes
49% - 2567 votes